Kitra – fanomanana ny CAN :: Hanitsy ny lesoka tamin’ i Luxembourg ny Barea • AoRaha
Kitra – fanomanana ny CAN Hanitsy ny lesoka tamin’ i Luxembourg ny Barea
Fitsapana faramparany. Taorian’ny lalao tsy dia nahom­by nataon’ny ekipam-pirenena Malagasy, taranja baolina kitra, na ny Barean’i Madagasikara, nanoloana an’i Luxem­bourg, dia mikasa ny hana­­rina izany manoloana an’i Kenya izy ireo, anio. Hotanterahina ao amin’ny kianjan’i Robvert Bobin de Bondoufle, any Fleury atsimon’i Paris (Frantsa), ity lalao ara-pirahalahiana faharoan’ ny ekipa malagasy ity.
Hanomboka amin’ny 9 ora alina amin’ny ora eto Madagasikara izany. “Lesoka tamin’ ny lalaonay nanoloana an’i Luxembourg ny tsy fahaizana nifehy ny fiafaran’ny lalao satria efa tany amin’ny fanam­pim-potoana no nanasahalan’izy ireo ny fitarihana 3 noho 1, vitanay teo amin’ny minitra faha-65”, araka ny namba­ran’ ireo mpilalao taorian’iny lalao ara-pirahalahiana tamin’ny alahady iny. Samy hanomana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN, hotante­rahina any Ejypta amin’ny 21 jona hatramin’ny 19 jolay ho avy izao, na i Madagasikara na i Kenya. Miray vondrona amin’i Nizeria, Burundi ary Guinée ny Barean’i Madagasikara (B), raha ao amin’ny vondrona C miaraka amin’i Alzeria, Sénégal ary Tanzanie kosa i Kenya. Isan’ny naha­sarika an’ity farany hiatrika lalao ara-pirahalahiana amintsika, araka ny loharanom-baovao, ny efa nihaonantsika tamin’i Sénégal teo amin’ny dingan’ny fifanin­tsanana nikatsahana tapakila.
Aorian’io lalao hihaonana amin’i Kenya io dia mikasa ny hiverina eto Madagasikara hangataka tso-drano amin’
ny vahoaka malagasy ny Barean’i Madagasikara.
“Na dia handreraka anay aza ny fandehanana any Madagasikara mialoha ny CAN dia heverinay fa hery lehibe ho an’ny mpilalao ny hihaona amin’ny mpiray tanindrazana aminy. Hiatrika fanazarantena misokatra ho an’ny rehetra izahay ary mino aho fa
manodidina ny telo alina ireo mpijery mety ho avy ao”, hoy i Nicolas Dupuis tao amin’ny onjam-peo RFI.
Fibatana fonjamby- Tompondaka eran-tany Hiady any Thaïland indray i Rosina, Vania, Eric ary Tojo
Tenisy ambony latabatra Horaisin’i Madagasikara ny fifaninanana afrikana 2020
Basket-ball- Fifaninanam-pirenena Tafakatra manasa-dalana ny Mb2all, JEA, Ankaratra ary SBBC
Basket-ball N1B :: Ekipan’Analamanga telo tafita amin’ny ampahefa-dalana